Darawallada Android ayaa lagu dari doonaa Linux 3.3 kernel | Laga soo bilaabo Linux
Soosaaraha Kernel Greg Kroah-Hartman ayaa soo kabsaday darawallada (kantaroolayaasha) ee Android laga saaray tan iyo Linux kernel 2.6.33 -guga gu'gii 2010- waxaana lagu guuleystay in dib loogu celiyo laanta horumarka ee Kernel Linux 3.3.
Fikradda ayaa ah in Linux 3.3 ay awood u yeelan doonto inay ku shubato aaladda Android iyada oo aan loo baahnayn balastar, in kasta oo dhammaan qalabka Android aysan si toos ah ugu dhaqaaqi doonin laanta weyn ee horumarinta. Tusaale ahaan, lambarka loo yaqaan 'WakeLock', oo ka caawiya baytariyada aaladaha Android muddo dheer, laguma dari doono.
Kooxda Aasaasiga ah ee Macaamiisha Macaamiisha ee Linux, oo qayb ka ah Linux Foundation, oo ay weheliyaan kooxda Linaro iyo dhowr horumariyeyaal madax-bannaan, ayaa ka wada shaqeynaya mashruucan Greg Kroah-Hartman.
Tim Bird, Madaxweynaha Kooxda Naqshadeynta, ayaa daahfuray mashruuca Android Mailing iyadoo ujeedadu tahay isku dubaridka shaqada ku biirista astaamaha Android kernel-ka Linux.
Horumariyayaashu waxay xiiseynayaan inay gacan ka geystaan ​​isku-darka balastarrada Android horumarka guud ee Linux ay ka qori karaan xidhiidhkan.
source: H Furan
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Isticmaal FileLet » Darawallada Android ayaa lagu dari doonaa Linux 3.3 kernel
Oo kanu waa sida software-ka bilaashka ahi u shaqeeyo =)